14 Metric Ekutarisa pane neDhijitari Kushambadzira Campaigns | Martech Zone
Pandakatanga kuongorora iyi infographic, ndaive ndisina chokwadi kuti paive nemametric akawanda asipo… asi munyori aive pachena kuti vaive vakatarisa digital kushambadzira mishandirapamwe uye kwete zano rese. Kune mamwe mametric isu atinoona zvakazara, senge huwandu hweanosimudza mazwi akakosha uye avhareji chinzvimbo, masocial share uye mugove wezwi ... asi mushandirapamwe unowanzove nemhedziso kutanga uye kumira saka haisi metric yega yega inoshanda mushanduro yakatsanangurwa.
ichi infographic kubva kuDhijitari Kushambadzira Philippines inonyora iyo metrics akakosha yekutarisa pakuongorora a digital kushambadzira mushandirapamwe.
Pakazara saiti traffic, traffic traffic, nharembozha, tinya-kuburikidza chiyero (CTR), mutengo-wega-kudzvanya (CPC), matriki ekushandura, chiyero chekushandura (CVR), mutengo pamutungamiri (CPL), chiyero chebhuremu, avhareji peji maonero pa kushanya, avhareji mutengo pamapeji ekuona, avhareji nguva pane saiti, chiyero chevashanyi vanodzoka, dzoka pakudyara (ROI), uye mutengo wekutenga vatengi (CAC) ese akanyorwa seakakosha.
Tags: avhareji mutengo pamapeji ekuonaavhareji peji maonero pakushanyaavhareji nguva pane saitibounce ratecactinya-kuburikidza chiyerometrics ekushanduramwero wekushandurwamutengo pakubayamutengo pamutungamirimutengo wekuwana mutengicpccplctrmutengi kutora mutengocvrnharembozhaYakazara saiti trafficmwero wevanodzoka vashanyidzoka pane investimenti (ROI)traffic zvinyorwa